About Us - Ningbo Faharoa hormonina Co., Ltd
Ningbo Faharoa hormonina Factory dia naorina tamin'ny 1988. isika no nanolorana azy ho biby fanatodizan'ny orinasa nandritra ny 30 taona, ary mitambatra manta ara-nofo, ny fikarohana sy ny fampandrosoana, fanamboarana, mandinika, varotra, ary ny mpanjifa fanohanana miaraka mba ho orinasa goavana. Dia nahazo ny orinasa ho toy ny "Zhejiang Avo-teknolojia orinasa" sy Cixi orinasa Top 20 ".
Ny orinasa dia manana lisitra feno miteraka vokatra, ary ny vokatra dia vola-mahomby. Izahay koa ny vokatra lehibe 'API voasoratra anarana. Isika no manana ny lehibe indrindra amin'ny trano biby tsy mamokatra faritany mba mamantatra ny vokatra fiantraikany amin'ny totozy sy ny voalavo. Noho izany, ny fahombiazana sy ny fahamarinan-toerana ny vokatra azo antoka. Ny hormonina pananahana mandray ny 50% tsena anjara ny firenena iray manontolo ny Ranch sy ny tantsaha tsena. Isika no tena mpamatsy ny Mengniu, Yili, ny Fivoaran'ny Fambolena, renivohitr'i Beijing fambolena, COFCO, Zhongding ronono fambolena, Wens, Chuying fanatsarana ny taha-mpiandry ondry, Tai Chia vondrona, Bright ronono sy ny orinasa lehibe.
Ny orinasa sangany manana ny teknolojia sy ny R & D hery. Professional dokotera mpitsabo 30 mitarika vato nasondrotry ny sekoly toy ny R & D ekipa, mandroso soa aman-tsara mihoatra ny 100 entana, ary ny sasany amin'ny vokatra dia nataony an-pamokarana. Ny Chorionic chorionique (HCG) 's manta potency ara-nofo (10000iu / mg) be dia avo noho Eoropeana sy Amerikana Pharmacopoeia fenitra (4500iu / mg), ary mahazo laza iraisam-pirenena. Isika izay misahana ny fampandrosoana ny vokatra vaovao: D ny sodium sy klôro Butylamine toaka telo prostaglandin G2 Alpha no voasoratra vaovao ny zava-mahadomelina fitsaboina momba ny biby, ary eny an-tsena. (Isika no hany orinasa izay voasoratra anarana D klôro hatramin'izao.) Ny orinasa voasoratra ara-panjakana ho an'ny tsindrona Menotropins (anarana hafa: Chaopai su).
Ny orinasa dia be ny vokatra ampiasaina amin'ny trondro, kisoa, Diary omby, ondry, biby fiompy, sns Fa trondro, dia manana iombonana amin'ny Salmon GnRHa ho fanafody ny fotaka trondro. Fa kisoa, isika amin'izao fotoana izao voasoratra anarana tongfasu (anarana taloha PC600), ary manana vokany mitovy fanafody famonoana bibikely toy ny Intervets 'PG600. Ny vokatra ny fisoratam vaovao Altrenogest am-bava rano efa nandalo ny minisitry ny fambolena famerenana, ka ho hamita tsy ho ela ny fisoratam. Mizaha toetra ny Altrenogest amin'ny Ranch lehibe, rehefa mampirisika ny swines 'batch fitantanana, dia hanatanterahany miavaka vokatra; tamin'izany andro izany, amin'ny fampiasana PMSG sy miara-GnRH swines 'ny fotoana raikitra insemination, fanatsarana swines' fanatodizan'ny mahay. Fa Diary omby, mampiasa GnRH sy miara-D klôro Diary insemination ny fotoana raikitra, dia manana tsara vokatry ny Corpus luteum, ary ny fanatsarana ny tahan'ny vohoka Diary omby.
Tao anatin'ny 30 taona, dia mbola hanohy nandroso ny teknolojia, mba hanatitra tsara kokoa vokatra sy ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Ny asa fitoriana dia tsy mikendry ny ho mpitarika orinasa iraisam-pirenena izay manana ny toetra tsara indrindra eo amin'ny an-tsaha. Ny fahitana dia dia hanenjika indrindra eran-mandroso ny teknolojia sy ny vato nasondrotry ny matihanina mba hamoronana faran'izay tsara sy ny asa tsara indrindra, ihany koa ny hahazo laza sy ny tsena anjara amin'ny soa ny fitokisana sy ny tsy fivadihana ary koa ny miovaova toetra.